INONA NO DIE CASTING SERVICE
Die-casting dia dingana fanariana metaly miavaka amin'ny fampiharana ny fanerena avo amin'ny ranon-javatra vy aluminium firaka amin'ny alalan'ny milina fanariana maty, ary manindrona azy ao amin'ny lava-lasitra natao amin'ny hafainganam-pandeha avo mba hanipy aluminium firaka ampahany amin'ny endrika sy ny habeny voafetra. amin'ny lasitra.
1. Fizotry ny fanariana metaly, fanerena mafy amin'ny metaly voarendrika amin'ny alalan'ny lasitra.
2. Ny vidin'ny bobongolo dia avo, mety amin'ny famokarana faobe ny vokatra be dia be.
Ny dingana lehibe amin'ny dingana dia toy izao manaraka izao
Dingana 1: fandrendrehana ny metaly
Amin'ny ankapobeny dia mampiasa lafaoro elektrika na lafaoro coke mba hanafanana ny ingot metaly mitsonika amin'ny toetry ny rano, mitazona ny mari-pana eo amin'ny 600-700 ℃.
Dingana 2: rehefa levona ny aliminioma metaly, ny bobongolo maty fanariana mifanaraka amin'izany dia atambatra amin'ny milina fanariana maty, ary atao ny fanamainana mialoha, ary amboarina ny milina fanariana maty mba hahazoana antoka ny fanjakana miasa tsara.
Dingana 3: Arotsaka ao amin'ny efitrano fanerena ny fanaovan-gazety ny metaly alim-borona, ary avy eo ny rafitra tsindrona an-gazety dia manindry ny rano aluminium narotsaka ao amin'ny lavaky ny bobongolo amin'ny alàlan'ny piston amin'ny hafainganam-pandeha avo, ary ny lalana manokana dia ny Sleeve mandalo amin'ny efitra fanerena aloha.Ny barika avy eo dia miditra amin'ny lalan'ny fikorianan'ny rivotra ary miditra amin'ny bobongolo ary avy eo mameno ny lavaka manontolo.
Dingana 4: Rehefa nesorina ny fanariana, ny rano aluminium dia mameno ny lavaka lasitra iray manontolo, ary avy eo dia manomboka mangatsiatsiaka sy mivaingana ao anatin'ny fotoana fohy, ary ny bobongolo dia misokatra amin'ny fotoana voatondro hanesorana ny fanariana.
Dingana 5: Rehefa avy nesorina ny fanariana dia atsipazo ny bobongolo (hosorana ny bobongolo) ary atokàny ny bobongolo mba hiomanana amin'ny tsingerin'ny fanariana vaovao manaraka.Ny bobongolo dia matetika vita amin'ny metaly matanjaka kokoa, ny sasany amin'izy ireo dia mitovy amin'ny famolahana tsindrona.
Ny ampahany toy izany dia novokarina tamin'ity dingana ity izay matetika antsoina hoe ampahany fanariana maty.
Fangatahana ho an'ny serivisy die casting
• Fitaovam-pitaterana • Fitaovana fampitana • Jiro • Varavarana elektronika • Valve • Fitaovana mekanika • Fanorenana
Endri-javatra amin'ny serivisy fanariana maty
Ny compact ampy dia afaka manamafy ny ampahany amin'ny lafiny mekanika fananana. Raha tokony ho ny hevitrao hafa angamba amin'ny vy na metaly mavesatra hafa, mitsitsy vola amin'ny fitaovana sy ny fitaterana.
Ny eny ambonin'ny malama sy fisaka dia mahatonga ny endrika ho tsara tarehy sy tsara tarehy.
Fandeferana refy mazava tsara
Ny as-cast matetika dia afaka mahatratra CT5-CT4 naoty, mazava ho azy fa afaka mampihena ny sasany machining dingana sy ny vidiny miaraka amin'ny marina fanariana refy fandeferana.
Tsy misy na kely dia kely ny porosities
Afaka manampy anao hieritreritra dingana isan-karazany hamolavola tetikasa izany, rehefa manao izany ianao'Tsy mila mieritreritra ny mitete ianao, manamaivana ny enta-mavesatrao ary mitahiry ny fandanianao fanampiny.
Sary ampahany bebe kokoa ho an'ny ampahany manokana
Fizarana milina vy Robot Machining Parts Fizarana Masinina Lathing Custom Precis Machining Part Parts machining anodized Kojakojan'ny milina môtô